Wuxuu ku barbaaray miyiga, weligiina magaalo
subax kama soo toosin, xoolaha dhaqaalahooda ayuu
aad u yiqiin. Nolosha miyigana mel fog buu ka
gaaray, magaalada haddii wax looga baahdo aabihii
baa reerka u safri jiray.
Ninka aan dhimman dhibaato waa u hurid la’aanc,
maalintii dambe ayuu aabihii allaystay, isagana
irrido hawleed ooh or lihi ku furmeen. Markii jiilaal
mareen ayaa baabuurkii ay fuushanaayeen mar qura
ah jirjircad iska rogay, intii haruubkoodii buuxsamay
weay geeriyoodeen. Faaraxse dhaawac uu la miyir
doorsoomay oo aan nabar mjuuqda alahay ayaa
a /r__i __ i / i v-4 r ur i i i
X fJL iA X JLVJLJ.
V AV / U V^
___JlZI i j f i r i a i i i <
i I 1 I l l I
J ______J – –
I I f “—I # 1 1 1 1 _ –
i – v o c
dhacday u soo gurmaday dadkii beeraha ka dhawraa
iyo baabuurada waddada maraysay, Faarax iyo
dhaawicii kleba waxaa degdeg loogu daadgureeyey
isbitaalkii ugu dhowaa.
Laba maalmood kaddib ayuu miyirsaday oo wax kala
gartay. Markiiba waxay ishiisu ku dhacday waxyaalo
aanu weligii il saarin. Sariiro, dhar cad lagu dedey,
dhalooyin sariiraha qaarkood ka soo kordeldella iyo
dad sariirahaas ku dul jiifay. Isaga oo aad u yaabban
ayuu ninkii sariirta ku jiifay oo ma naxe la oran jira>
waraystay oo yiri; “Waar bal meesha iiga warran •
“Meeshani waa aakhiro” ayuu ugu jawaabay ma-naxe
“waar xaq” Faarax baa is dhiibay, isaga oo aa
Cabbaar markii uu aamusnaa aya
oo cad iyo gabadh kaaliso aheyd
vvu.v ^ WvvdaAxda. iYcUC 00 U ctfKciy
Illayn la yaab ma lahee intuu is hayn kari waayey
buu ma-naxe la hadlay oo uu yiri; “Waar kuwanin
maxay ahaayeen”? “Waa malai’gtii oo qof walba
wuxuu kasbaday siineysay Ma-naxaa miskiinkii ka
sii dhalaaliyey. “Waa xaq!” ayuu faarax mar labaaaa
yiri. Waxaanad aqon u lahayniba waa belaayo
adduune. wuxuu haddana QT k Sj” dad qolka qalLiinka
la geynayo oo rarab ama dhooliyaal lagu vvalwaalayey.
Markaasuu mta uu jiifkii sidii wax boodaya
ka hinqaday, ayuu ma-nexe ku yiri; “xageebaa loo
wadaa?” “waa qoladii la xisaabay oo cadaabta iyo
janada ayaa look ala dirayaa” “Waa xaq”! buu misana
sidiisii ku celiyey.
jjaxdin iyo ai’gagax inta uu Ilaahay lsugu Kcciwy
aarax ayuu daqad wejigisiia ku beegneyd eegay,
. uuna arkay awr afar ahayd oo isbitaalka xaabo u
day. Ma’naxe oo markaas in uu kaco oo uu soo
°oldhaqdo u kaankaansanayey ayuu su’aal kale ku
ellyey oo yiri; “Waar awrtaan aakhiro joogtaana
jnaxay aheyd? “Waxay sidaan xaabadii Cadaabta
jidi lahaa” ayuu ugu jawaabay ma-nexe. 1 sna,
flPgdiisii “waa xaq”.
Muddo yar ka dib ayaa dhakhtarkii iyo kaalisadii
sariirtii Faarax soo gaareen oo intay kaarkiisii
qaateen dawooyin ugu qoreen iyagoon aika u kakla
Markii ay ka tageen ayuu ma-nexc weydiiycy oo yiri
waar maxay aniga ii qoreen” “Cadaabta” ma naxaa
deg-deg ugu jawaabay,
Ka dhig may ma-nexe miyi talo ku qabsatay
Faaraxna la joogo. Ka sheekee waxyaalaha ma-nexe
looga maadsan lahaa?
r- yfl –
R E E R M IY I IYO R E ER MAGAAL (gabay)
Qodobada soomaalidu ka gabaydu oo aad caanka u
ah waxaa ka mid ah Xifaalada, Gabayada xifaaladu
waxay ka yimaadaan dhinacyo badan oo kala duwan,
gabayada noocaasi ahi waxay qani ku yihiin Suugaan
nimo xeelad dheer, gabaygan soo socda waxaa isku
xifaalaynaya laba nin oo reer miyi iyo reer magaal ah,
waana kan Gabaygii.
Ninkii reer magaaika ahaa baa ninkii reer miyiga
ahaa ku yiri:
1. Walee daacuflow reermiyaan doocna garaneyne
2. dablashiday aroortii hadduu daamanka is
3. doqonimo waa wuxuu cadkiis doc uga
4. haddii roob ilaah shubo ooy dunji barwaaqowdo
5. oo doobi caana ah riyaha looga dalaf siiyo
6. oo rodol uu doon doon ku helay uga
7. isagiyo duqdiisii markaa dawlad la ismoodye
8. dam damtiyo hangoolkii majiroo diriri
9. maantaas ninkii dan ulahow day so hadalkaaga.
Jawaabtii ninkii reer miyiga ahaana waxay haeyd:*
1. Dunuunucaye goortuu qaxwaha dibinta
2. duuf lulaye goortuu kaluun labada daan
3. dayn qaatc mccshii nin rag ah debar ka
4, duryan xum< markuu deega buu dunidn
n diintiyo wuxuu caayayaa eebbe daayin e,
6. dat wad aan lagaaraneyn
she eg to
S. deeqdana haddii loogu daro darajo weeyaane
I 9. waxaa dowrada magaaliyo ninkii degelkeed
1. Dood an gabay ga ah ee la bad an in dhex martay
keebaad isleedahay waa lagu jilciyey waayo.
1. labada nin waliba sagaal tuduc buu tiriyey,
tuducii kastaba midka u dhigma la doono.
Wadaaddo iyo Wiilwaal
W A D A A D D O IYO Wwfufl/W A A L (Sheeko)
Ummad waliba waxay kedahay dhaqa hiddaheeduba
qarannimadeeda, midnima ’ waxa lagu ^aa m
ku dhisan yihiin. Uhism^ udciadii badneyd ee aan
karaa, afka oo la qoro. looyin badan ^
afkeennu qorneyn. & muteen. Wa^cV„vnU
hiddaheena iyo dhaqan raajkaa afkeell;‘ vaftbka
ku ay aan badannahay ^ xnurtideena
qorray, oo dabaqabatayn ;nna dhaafey•
leh, kagana kaban karra ^
Haddaynu u kacno xagga sheekooyinkahiddaha ah,
waxaynu kala kulmaynaa kuwo murti qoto dheeri ku
jirto, kuwo xifaale ah, kuwo maaweelo iyo madadaalo
leh iyo kuwo halxiraale, waxbarasho iyo aqoon
lijaabinba leh. Sheekooyitikaas oo runtii taariikh
ahaan muujinaya sida dhaqankeennu ahaan jiray,
waxa ka mid ah sheekada dhex martay wiilwaal iyo
W iilwaal wuxuu ahaa nin Garaad ah ooh al adag.
Gecesi gacalna ku hiro, nacabna ka hakado,
seeftiisuna aanay galka ku jirin, oo dood, deeq iyo
Wiilwaal oo maalin meel maraya, ayaa jidka kula
kuimay nin wadaad caalima ah, diintana ku xeel
dheer, dadkuna ku wada yagaan oo la oran jiray Awwadaadow,
maxaad dadka ku waanisaan ood u
Aw-Samatar baa intuu garaadkii hor u eegay
dhoosha ka qoslay. Kolkaasuu si fudud u yiri,
“Garaad cabsida Ilaahay baannu dadka ku
Wiilwaal baa cabbaar aamusay. Intuu faraskii ka soo
degay oo wadaadkii fool-kafool isu hor taagay, ayuu
waydiiyey, isagoo ilkacaddaynaya, “oo wadaad,
Ilaahay mooyee, cid kale oo laga cabsadaa miyaanay
Wadaadkii baa naxay oo yaabay oo u qaadan waayey.
Gadaal buu u booday sidii uu dhuxul dab ah ku
Wiilwaal baa iska dhaqaaqay, faraskiisii dusha uga
dhacay oo wadaadkii ku yiri; “dood baan ka leeyahay
ercygaase, bal haddaba wadaaddadiina oo dhami isu
qaylo dirta oo waa inoo burrito iyo geedkii halkaas
Meeshii baa lagu kala dhaqaaqay. Wadaadkii baa
qaylo kula dhex dhacay culimadii degmada. Wiilwaal
iyo arrinkiisii buu uga warramay. Halkii baa laysu
wada cid dirsaday. Kutubtii baa la soo gurtay,
la soo qabsaday, iyadoo ballankii lagu soconayo.
o tv/Wiilwaalna muxuu sameeyey. M geed dhibba la yiraahdo, jigjigana u ay< Wuxuu
hadhaca hoostiisa ood dheer . u ^ k eliyan a u
ka sameeyey ardaa ilaxid___ 5 ’ caWS si debecsan
banneeyey, daaftana dareemo iy ^,eg yahay•
loogu gogley, dacalladana c eyr • . o0da bawdka
Aqai-Soomaali weyne, wuxuu to dtaW ^ buu
dhabarkeeda. Ari wanan sooc.< ^aVydkii buu £ceS
keenay. Col fardooley ahna,
kastaba laba nin ka joojiyey.
ee mesha u yimaadeenna u darban,
ayaa Wiilwaal oo ay harcero socdaan laba nin oo xoo>
weyne, dharkii dagaalkana huwan, laba seefoodna
a sita, wadaaddadii irridda iska soo taagay. Intuu
A ^ … ___ __ _ 1 ¦ ^ I mm — —- ‘ -—— iliLUU
faadhumaystay oo lugba meel dhigtay giirna iska
kiciyey oo kelyaha qabsaday, waddaadadiina il xun
ku oegay, ayuu labadiisii nin ku yiri; “qabta” isagoo
gufuurka cirka u taagaya.
Labadii nine xoogga weynaa, ayaa labadii wadaad ee
ugu soo xigay soo qabtay oo kaxeeyey. Aqalkii
bawdka ku dheggenaa bay la galeen. Kolkaasaa qub
iyo qac iyo caacdu yeertay. Wadaadadi oo yaabsan,
oo dhegeha taagaya talana ku firidhaan tahay, ayaa
labadii xoogweyne soo noqdeen. Wiilwaal bay is
hareero taageen iyagoo seefihii oo dhiiggu tifta hayo
gacmaha ku sita.
Wiilwaal oo weld afka circa u taagaya, foolkana
ururinaya, ayaa haddana labadii nin ku yiri, “qabta”
sidii oo kale ayaa laba wadaad lala kala orday, aqalkii
lala galay oo qub iyo qacdu yeertay, seefihii oo dhiig
lehna mar kale lala soo noqday.
Mar Alle markii ay wadaadadii arkeen labadii
xoogweyne oo soo noqday, ayey oodda jebiyeen,
qabac… qayb iyaga ka mid ah, ayaa bawdkii intii
dhere le’ekaa xagga shishe iska dhigtay. Colkii
fardooleyda ahaa ee debedda tubnaa, ayaa soo
qabqabtay wixii fakaday. Wadaaddada intii kalena,
siday isu garbinayeen ee midba kan kale dusha uga
fuulayey, ayaa muskii oogada looga baxay. Iyadoo
raggii la moodo biiq la qabtay oo qaar jidhkoodii
ooddii jeex-jeexday, qaama dubku ka hoolmay sidii
loogu tumanayey oo nin waliba leeyahay, tolow
goormaa adna gacanta lagugu dhigi’.
“waar waa side? Oo maxaa idin helav” saw ;alahaa
Ilaah mooyee cid kale lagama cabsado”.
Goortaasaa wadaaddadii qaylo afka kala waaxeen:
waai garaad nanna dnammayn, waar garaad hanna
dhammayn!” Wfflwaal baa kolkaa yiri; “haddaba ma
ogaateen iii iAUa.Lieiyij.ci laga cabsado, aadmigiisana
laga baqo? Manta ka dib, wadaad hub la yaan arkin,
Wadaad walow Da qalabKaaga cjaado oo dadkaaga
dhinac ka raac”.
Afartii wadaad ee markii hore laga kaxeeyeyna,
iyagoo aan waxba wanankii martiqaadka loo keenay
mid soo gawracaan, ayey seefihii oo dhiig leh la soo
noqonayaan si ay wadaaddada u cabsi geliyaan..
Halkii baa wadaaddadii martiqaad sbaraf leh liogu
sameeyey, kolkii uu casharkii u dhammaaday ee la
garansiiyey in hub ia’aantu ay nacasnimo ieedahay.
Murti Soomaaliyeedna waxay idhaahdaa:
Dagaal gondahaaguu ka dhashaa.
Dooddaa wadaadada iyo Wiilwaal dhex marta> vvaxa>
muujinaysaa in wwiilwaal ujeeday, cu ma u
diintoodana inay haystaan oo ilaahay ka cabsadaE ,
dalkoodana wax ku taraan ai iyo addin a.
Sal aan c.arabay gabaygaan waxa uu mariyey isagoo
magaalada Neyroobi jooga halkaas oo uu nin uu
adeer u ahaa oo uu abaal badan u tirsanayey ugu
tagay, ninkaas oo markaas maal qabeen weyn ahaa
ayaa halkii uu odayga wax ka tari lahaa inta uu
qadiyey ayuu hadana dadkii kale ee Soomaaliyeed ku
diray oo yiri “Waa oday asaasaq ah ee hala hadlina”
Salaan gabayga wuxuu ku sheegay sadex arrimood
oo waaweyn oo uu wiilka u galay, waa tan koowaade
isagoo ninkaas iyo geeiiisiiha col isku ai-duubay ayaa
Salaan col uu watay u gurmaday soona lurtay, waa
tan labaade; mar kale uu ninkaas dowladu xirtay
ayuu Salaad dood iyo maal ku soo furtay, waa tan
saddexaade, Naag uu xoolo ka bixiyey oo laga
qabsaday lagana qaaday uu Salaan u soo furtay,
markii uu gar adag la galay reerkii ay gabadhu ka
asagoo arimahaas wuxuu sheegaya yin.
Qeylada xaduurkii ninkay xaraqJdLratyU Jamab lteydu ninkaan
• jilabkii xadhaadhaa ninkaan
¦ guuraha xambaarada ninkui
xidhkii odayodheerood marki
11n fo o n t t
7. waataan u 2
Q _; O • A r 1 1 I ) I V ( I
-vtu mgu smsneeyana
9. mumarkuba xublaxla foosha way xanaf
10. balse in ay xusuus daran yihiin xaylka kale
1 1. waxba yaanu xeerkav imarin xoolana • • •
12. xaashee nin labin kaa xistiyay xumihii waa
13. xeerbeegti murantaa gartay xeeli hadashaaye
3 4. xubin rag isku waajahay h aday xeyga ka
15. afku wuxuu la xoog yahay magliga xowda kaa
jara e, #
16. xafiiskii magaalada wixii xaalad iga gaaray
1 7. xabsigii cadaawaha ninkaan xaalan uga saaray
18. xoolaha markay imid ninkaan xulayey geeleyga
19. waxba yaanu xeerkay I marin xoolana I siine
20. xaashaa nin labin kaa xistiyey xumihii waa
Xaduur : baryo
2. Xaraqday : gubtay
1^3. Xuurtoobay : daalay
k4. Jilib : magic geed
5. Xagar : magic geed
1^6. Xidh : kob
7. La is x$niin taabtay : rag isku bareeray
8. U xuubsaday : ku booday
(). Xuurta . shimbir magaceed
waa ninki colka geela
dhacay madaxa u ahaa.
1 Si kooban u sharax tuducyada ka hadlaya in
‘ uu salaan inanka ka abaal dhacay iyo
iloshaha dhawaantiisa? ku
2 Immisa waxtar buu oday8u/ a^ f sheeg’
sheegay mid kastaba goonidiisa
3. afKU wuxuu la xoog j ^ tuducaasi
kaa jara e, ma kuia tanay
Guulseed: Ha sheegin
Ninkii on rl V> o V / W V 4 . JL I C iqaaqid u h1–o1l1l_a_naya haddaa
r > O n r l r r r 1 – r v « JLACtk^CLVA^CLlJ U
oo flad u xanaaox saJv oo Op uuleed hor ”
Guuleed: dhirta dhanka bidix ka soo hagaagta wuu
Guuleed: deaba la’aantiisa # • wax aan ku dhaaday 11*
Guuleed: cagta ayuu dhulka ku ballaarinayey…
radkiisuna si fiican ayuu u dhignaa.
Odaygii: oo ninkii muddiga ahaa kugu
quusreebaya, ku qanacaye ma ku
qanacday oo wax dhaadiddiisu intay gun
dheer tahay ma ku dhacday!
Ninkii: oo goorahaanba yaabsanaa, ku qancay oo
wuu iga kafiyey siduu tilmaanta awrka ku
Dhaad id: wax
laba jaw aan wo — ^ ^u.a.uv;
Tuumin: isku meel dhigi